Akhri Layaabka Aduunka: Arday Kartoon Madaxa Loo Galiyay Si Aanay U Qishin Imtixaan Laga Qaadayay + Sawiro. | Salaan Media
October 20, 2019 | Published by: admin
Mas’uul ka tirsan mas’uuliyinta machad ku yaal dalka India ayaa raalligelin bixiyay ka dib markii si weyn intarneedka lagu shaaciyay sawirrada ardayda machadkaasi oo kaartoomo madaxa loo geliyay si aysan imtixaanka u qishin.
Sawirradaasi ayaa ardaydaasi dhiganaya machadkaasi Bhagat ee ku yaal gobolka Karnataka laga qaaday xilli ay sameynayeen imtixaanka maadada Kimistariga.
Waxaa sawirradani ka muuqanayay arday madaxa loo geliyay kaartoomo hal dhinac oo kaliya loo banneeyay, si ardaydu aysan imtixaanka u kala qishin.
Mas’uul ka mid ah maamulka machadkaasi ayaa arrintaasi ka hadlay, wuxuuna dhacdadaasi ka raalligeliyay mas’uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee degmadaasi.
MB Satish ayaa BBC-da laanta Af-Hindiga u sheegay in uu aad uga xun yahay oo uu raalligelin ka bixinayo qaabka aan habbooneyn ee ay isugu dayeen in ay uga hortagaan in ardaydu ay imtixaanka qishaan.
Waxa uu sheegay in ay tijaabinayeen tallaabadaasi looga hortagayo qishka, ka dib markii ay ka war heleen in meelo kale laga isticmaalo
Waxa uu mas’uulkani sidoo kale sheegay in ay sidaasi sameeyeen ka dib markii ay ogolaansho ka heleen ardaydii imtixaankaasi sameynaysa iyaga oo aan la khasbin, sidaa awgeedna uu xitaa arday kastaa uu la yimid kaartoonkii madaxa loo gelin lahaa.
Marna ma jirin wax khasab ah. Sawirradaasi waxaa kaaga muuqanaya ardayda qaar oo kaartoon uusan madaxa ugu jirin,” ayuu yiri. “Ardayda qaarkood ayaa 15 daqiiqo ka dib iska bixiyay kaartoonkii madaxa ugu jiray, qaarkoodna 20 daqiiqo ka dib ayay iska tureen, saacad ka dibna innaga ayaaba ku amarnay in ay iska bixiyaan.”
Mas’uuliyiinta gobolka aya sida la sheegay isla markii ay arrintaasi maqleenba tagay machadkaasi si ay maamulka machadka ugu muujiyaan in aysan ku faraxsanayan sida arrintaasi ay u dhacday.
SC Peerjade, oo ah guddoomiye ku xigeenka guddi maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada gobolkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay “mid bani’aadannimada ka baxsan”.
“Markii aan helay farriinta arrintan ku saabsan, waxaan markiiba aaday machadkaasi, oo waxaan amray macallimiinta in ay arrintaasi joojiyaan,” ayuu yiri sida lagu daabacay wargeyska Times of India. “Waxaan sidoo kale digniin siiyay maamulka machadkaasi, waxaanan haatan ka baaraan dagayaa tallaabadii laga qaadi lahaa macallimiintii arrintaasi sameeyay.”
Mas’uuliyiinta machadkaasi ayaa sheegay in isla markiiba ay arrintaasi joojiyeen haatanna ay la shaqeynayaan maamulka guddiga waxbarashada ee arrintan soo farageliyay.